अचम्मैका योगी! जसले ४ महिनाकी छोरीसहित अपाङ्ग महिलालाई स्विकारेर बिहे गरे.. – Khabar PatrikaNp
अचम्मैका योगी! जसले ४ महिनाकी छोरीसहित अपाङ्ग महिलालाई स्विकारेर बिहे गरे..
October 18, 2020 40
५२ वर्षका हरिनाथ योगीले आफ्नो घर दाङ घोराही नगरपालिका १० भएको र चार वर्षअघि पोखरा आएको सुनाए । बाबा भन्दा झण्डै आधा उमेर कम कमलाको विगत भने तीतो छ । स्याङ्जा खिलुङदेउराली घर भएकी २९ वर्षीया कमलाको जन्मदेखि नै बायाँ गोडा चल्दैनन् । यताउति हिँड्न पनि वैशाखी चाहिन्छ । घरतिरै रहेका बेला एउटा मजदुरले उनलाई बिहे गर्छु भन्दै भगाए । उनलाई अझै पनि आफ्नो पहिलो श्रीमान्को नाम थर थाहा छैन । ‘खोई पर्वत कुश्माका रे । राम्री केटी देख्यो । तिम्रो खुट्टा नि छैन । म लैजान्छु पाल्छु भनेर लगेछन् ।’ — योगीले रहस्य खोले– ‘के को पाल्नु ? पोखरा ल्याएपछि पृथ्वीचोकमा बसपार्कतिर माग्न पठाउने अनि आफू मोज गर्न थालेछन् ।’ योगीको कुरा नसकिँदै कमलाले थपिन् – ‘पोखराबाट काठमाण्डु लगेर स्वयम्भूमा माग्न बस्न भन्यो । मैले बटुलेको सबै पैसा रक्सी खान्थ्यो । दिनदिनै कुट्थ्यो । पछि रक्सी खाँदा खाँदै म¥यो ।’
श्रीमान् बित्दा छोरी जन्मेको दुई महिनामात्रै भएको थियो । सुत्केरी महिला देखेपछि प्रहरीले स्याङ्जा माईती थाहा हुनासाथ बस चढाएर पोखरातर्फ फकाईदिए । त्यसपछि कमला विन्ध्यवासिनी मन्दिर सम्झेर त्यहाँ पुगिन् । ‘साह्रै गाह्रो थियो हजुर । न खान पाईयो न सुत्न पाईयो । बाबाले आपत्मा ठूलो गुन लगाउनुभयो । सबै भगवान्कै खेल ।’ कमला बाबातिर हेर्दै खुशीभाव प्रकट गरिन् । अहिले कमला बाबासँग मन्दिर पछाडी कोठा भाडामै लिएर बस्दै आएकी छिन् ।
योगीले फेरि भने – ‘मैले अवला नारीलाई दया गरेको हुँ । नत्र चार महिनाकी सुत्केरी स्याहारेर कसले पाल्छ ? त्यसमाथि उनी अपांग छिन् । माया बसेपछि पाएको छोरो नि १३ महिना पुग्यो । ल हेर्नुस् त ?’ कमला लजाईन् । ‘आफ्नो छोरो जस्तै छोरीको माया लाग्छ त ?’, प्रश्न सुनेपछि बाबालाई दिक्क लागेछ क्यारे, भनिहाले– ‘हे भगवान् , नत्र हुर्कनै पाउने थिएन नि । चार महिनादेखि स्याहारेको छु ।’ स्रोत :live60media.com
Prevपति बाहिर भएको बेला गर्भवती भएकी श्रीमतीले दिइन् ,यस्तो जवाफ, दुनियाँ चकित…,
Nextशिलालेखमा आफ्नो नाम नराखेको भन्दै उपमेयरले बजारिन ढुङ्गा – (भिडियो सहित)
पूर्वराज्यमन्त्री खड्काको गाडीले ठ’क्क’र दिँदा श्रीमतीको निधन, श्रीमान् घाइते : घटना लुकाउन प्रहरी नै सकृय …!
अहिलेकै दरमा कोरोना संक्रमित बढे सरकारले पुनःलकडाउन गर्न सक्ने स्पष्ट संकेत
अब लकडाउन हुँदैनः स्वास्थ्य मन्त्री ढकाल
कलिलो यु’वतीहरु राखेर यौ’न धन्दा : भिडियो हेर्नुहोस (24645)
२५०० तिरे काठमाडौंमा १५ वर्षे किशोरी छ्यापछयाप्ती,साहुनीले १५ सय खाइदिन्छे, मलाई एक हजारमात्रै। थोरै पैसा पाउँदा रुन मन लाग्छ। (20932)
अचानक सिल गरियो भर्खरै काठमाडौंका यी ठाउँहरु, घर बाहिर ननिस्कन प्रशासनको आग्रह !! (13599)